ကြယ်ပြာရဲ့ အိမ်ကလေး: July 2012
Credit to http://wynnechenart.blogspot.sg
သူကပြောဖူးတယ် “ပြောမှလုပ်တာကျွန်၊ လူဆိုတာ မပြောပဲသိရတယ် …” တဲ့။ အဲ့ဒီစကားမပြောခင်ကတည်းက သူလိုအပ်တိုင်းနားစွင့်ပြီး ဖြည့်ဆည်းနိုင်တာလေးတွေ ဖြည့်ဆည်းပေးနေကျပါ။ တစ်လမှ တစ်သောင်းသာသုံးနိုင်တဲ့ကျမ လက်ထဲမှာ ငွေငါးထောင်ပဲကျန်တော့တဲ့အချိန်မှာ သူ့မှာ ၀တ်စရာအင်္ကျီတွေ ကုန်နေပြီမလျှော်ရသေးဘူးလို့ မတော်တဆ ကြားလိုက်တော့ မျက်နှာလိုအားရနဲ့ ၂၅၀၀ိ တန် မီးခိုးရောင်ဖျော့ဖျော့ရှပ်အင်္ကျီတစ်ထည်ကို ၀ယ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ သူ့ရဲ့မှတ်ချက်က “အင်္ကျီ ရင်ဘတ်အိတ်ပေါ်မှာ တံဆိပ်ပါတာ ငါမကြိုက်ဘူး၊ ပြီးတော့ ငါက ငါးထောင်တန် အင်္ကျီပဲကြိုက်တာ” တဲ့။ အဲ့ဒီအင်္ကျီလေးကို ကျမမေးလွန်း၊ပြောလွန်းလို့ တစ်ခါတော့ဝတ်ဖူးတယ်။ အဲ့ဒီတစ်ခါလေးဝတ်တာနဲ့တင် ကျမ တော်တော်ကျေနပ်ခဲ့ပါတယ်။
သူ့မျက်နှာသုတ်ပုဝါကြီး ညစ်ပတ်ပေရေနေတာတွေ့တဲ့အခါ ငှက်ကလေးနှစ်ကောင်ပါတဲ့ မျက်နှာသုတ်ပုဝါ အပြာနုနုလေးကို ၀ယ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ သူပိုက်ဆံပြတ်တဲ့အခါ သူမပြောခင် သူ့ပိုက်ဆံအိတ်ထဲကို ကျမမှာရှိတဲ့ပိုက်ဆံရဲ့ တ၀က်တိတိ အမြဲထည့်ပေးခဲ့တယ်။ သူကြိုက်တဲ့ဘောပင်အကောင်းစားကို တိတ်တဆိတ်မှတ်ထား၊ ပိုက်ဆံစုပြီး ၀ယ်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ ဒါပေမယ့် ကျမကြိုးစားမှုတော်တော်များများက သဲထဲရေသွန်ဖြစ်ခဲ့တာများပါတယ်။ အဲ့ဒီအခါမှာ မပြောပဲလုပ်တိုင်းလဲ အသိအမှတ်ပြုမှုမခံရရင် အလုပ်ဟာ အထမမြောက်ဘူး ဆိုတာကို ကျမ နားလည်လာခဲ့တယ်။
သူကပြောဖူးတယ် “နင်က သိပ်အတ္တကြီးတယ်တဲ့ ဘယ်တော့မှ နှစ်ဘက်မျှ ကြည့်မပေးတတ်ဘူး” တဲ့။ ဒီစကားနောက်ကွယ်မှာ ဘယ်လိုအရောင်တွေစွန်းပေနေသလဲလို့ အဓိပ္ပါယ်ဖော်ကြည့်ဖို့ထက် ကျမရဲ့အတ္တစိတ်ကိုသာ ချိုးနှိမ်တတ်ဖို့ ကြိုးစားခဲ့တယ်။ အကြီးပီပီ ကျမရဲ့ မကောင်းတဲ့အကျင့်လေးတွေ ထောက်ပြပြုပြင်ပေးတယ်ဆိုပြီး သူ့ကို တိတ်တဆိတ်ကျေးဇူးတွေတင်ခဲ့ဖူးတယ်။
၂၀၀၃ရဲ့ ဗယ်လင်တိုင်းနေ့လေးတစ်နေ့မှာ ကျမက သူ့အတွက် e-Card လေးကို မေးလ်ကနေတဆင့်ပို့ပေးခဲ့တယ်။ ကျမကိုယ်ကျမ သိပ်ရိုမန်တစ်မဖြစ်ဘူးလို့ထင်လို့ သူသဘောကျမလားရယ်လို့ ကျမပို့ပေးမိတာပါ။ ကျမဘ၀မှာ ပထမဦးဆုံး ပို့ပေးဖူးတဲ့ ကဒ်လေးဆိုလဲ မမှားပါဘူး။ သူက “နှစ်ယောက်စလုံး ရန်ကုန်မှာကို ဘာလို့ မေးလ်ပို့နေမလဲ ကဒ်ပို့ချင် ငါ့လက်ထဲ ရောက်အောင်ပို့လေ” လို့စာပြန်တော့ အဲ့ဒီနေ့မှာ ကျမသူ့လက်ထဲ ကဒ်အရောက်ပို့ဖို့ လုံးပန်းရတော့တာပေါ့။ ယောက်ျားလေးဖြစ်တဲ့သူက ကျမကို ကဒ်လေးပို့ပေးသင့်တာပေါ့လို့ မတွေးခဲ့တာ သူအလုပ်အားမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတဲ့ ကျမရဲ့အတွေးလေးကြောင့်ဆိုတာလည်း သူသိပုံ၊မြင်ပုံမရပါဘူး။ ချစ်သူတွေ အချစ်မညီတော့တဲ့အခါ ရင်ဘတ်ထဲကစကားတွေ ကြားနိုင်စွမ်းမရှိတော့တာကို ရိပ်မှ မရိပ်မိခဲ့ပဲလေ။ ရှိပါစေတော့။
အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျမက အလုပ်(၂)ခု လုပ်နေတဲ့အချိန်။ မနက်ပိုင်းအလုပ်က မနက် ၉ နာရီကနေ ညနေ ၆ နာရီထိ။ ညနေ အချိန်ပိုင်းအလုပ်က ည ၇ နာရီကနေ ၉ နာရီထိ။ ကန်တော်လေးက နေ လှည်းတန်းကို ၁ နာရီအတွင်း အရောက်သွားဖို့ ကျမဘယ်လောက် အပြေးအလွှားလုပ်ရတယ်ဆိုတာ သူလဲသိပါတယ်။ ညနေပိုင်းအလုပ်မှာက သူက Team Lead ဆိုတော့ ကျမအလုပ်နောက်ကျရင် သူအပြောအဆိုခံရမှာစိုးလို့ တစ်မိနစ်တောင် နောက်မကျရဲပါဘူး။ အဲ့ဒီတစ်နာရီအတွင်းမှာ ကဒ်ကို အပြေးအလွှားရှာဝယ်၊ ကဒ်ပေါ်မှာစာရေး ချွေးတပြိုက်ပြိုက်နဲ့ ည ၇ နာရီအမှီ အချိန်ပိုင်းအလုပ်ကို ရောက်ခဲ့တယ်။ ကျမစိတ်ထဲမှာတော့ ငါသူဖြစ်စေချင်သလို လုပ်ခဲ့နိုင်တယ်ဆိုပြီး ပီတိတွေ အပြည့်နဲ့ပေါ့။ ကျမသူ့လက်ထဲ ကဒ်လေးထည့်လိုက်ရင် သူချီးမွမ်းမလားလို့ မျှော်လင့်ခဲ့မိပါတယ်။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကဒ်လေးကို ထုတ်တောင်မကြည့်ပဲ သူ့အံဆွဲထဲ ပစ်ထည့်ပြီး အံဆွဲကို ပြန်ပိတ်လိုက်တော့ အထဲကပစ္စည်းတွေကြောင့် ကဒ်လေးခေါက်ပြီးတွန့်ကြေသွားခဲ့သလို ကျမပီတိစိတ်လေးလဲ တွန့်ကြေသွားခဲ့ရဖူးတယ်။
လူတွေက မလိုချင်တော့တဲ့ အရာတစ်ခုကို စွန့်ပစ်ချင်တဲ့အခါမှာ နည်းမျိုးစုံကို သုံးလေ့ရှိကြတယ်။ စွန့်ပစ်ချင်တဲ့အရာက သက်ရှိဆို တချို့က ပေါ်တင်စွန့်ပစ်ကြတယ်၊ တချို့က နာမည်ကောင်းယူပြီးမှ သူ့အလိုလိုစွန့်ခွာသွားအောင် လုပ်တတ်ကြတယ်။ ကျမအဖြစ်က ဒုတိယတစ်မျိုးထဲမှာ အကျုံးဝင်ခဲ့တယ်ဆိုတာ အားလုံးပြီးသွားမှ ကွင်းဆက်တွေ တချက်ချင်းပေါ်လာခဲ့တယ်။ ကျမ သိပ် “အ” လွန်းခဲ့တာလား ဒါမှမဟုတ် အပြစ်မမြင်ချစ်တတ်ခဲ့လွန်းတာလား?
သူ့လက်ကို လှမ်းဆွဲကိုင်လိုက်တဲ့အချိန်မှာ အရင်လို ကျမလက်ကို ပြန်ဆုပ်ကိုင်ခြင်းမရှိတော့ဘူး။ ကျမက လက်ကို အတင်းလိုက်တွဲရင် “လူတွေအရမ်းရှုပ်တယ် လက်တွဲရင် ကန့်လန့်ကန့်လန့်နဲ့ လက်မတွဲစမ်းပါနဲ့” ဆိုတဲ့စကားအတိုင်း ကျမသူ့ကို လက်တွဲဖို့ မကြိုးစားဖြစ်တော့ပါဘူး။ ကျအချစ်တွေကို သူလွယ်လင့်တကူ လစ်လျူမရှုလောက်ပါဘူးဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်နဲ့ သူကျမကို သိပ်အလေးမထားတော့ပေမယ့် သူ့ဘေးမှာ တိတ်တဆိတ်သာ နေတတ်ခဲ့တာ အသားကျနေခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ “အနှိုင်းမဲ့” ဆိုတဲ့ သီချင်းလေးက ကျမရဲ့ဖေးဘရိတ်ပေါ့။
သူအပါအ၀င် ကျန်တဲ့သူငယ်ချင်း သုံးယောက်ပေါင်းပြီးလုပ်ရမယ့် ဒေါ်လာငါးထောင်လောက်တန်တဲ့ ပရောဂျက်တစ်ခုကို လက်ခံရလိုက်တဲ့အချိန်မှာလည်း ကျမတို့ သဘောထားကွဲလွဲမှုတခုဖြစ်ခဲ့တယ်။ ကျမက ကျမအဖေကို အလုပ်ကိစ္စတိုင်း တိုင်ပင်လေ့ရှိတော့ ဒီပရောဂျက်အကြောင်းပြောပြမိတယ်။ အဖေက ၃ ယောက်ပေါင်းဂွိုင့်အကောင့်ဖွင့်ထားရင်ကောင်းမယ်လို့ အကြံပေးတာကို သူသဘောမကျခဲ့ဖူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီပရောဂျက်အတွက်စစ်စတမ်ဒီဇိုင်းဆွဲတာကော၊ ဒေတာဘေ့စ်ဒီဇိုင်းဆွဲတာကောမှာ ကျမလုပ်အားတွေအများကြီးရယူပြီးချိန်ကျမှ သူပဲလုပ်တော့မယ်ရယ်လို့ ကျမအကူအညီတွေကို ရပ်တန့်ခိုင်းခဲ့တယ်။ စိတ်မကောင်းဖြစ်ပေမယ့် အဖေ့ကို ပရောဂျက်မဖြစ်တော့ဘူးရယ်လို့ အကြောင်းပြပြီး ရေငုံနှုတ်ပိတ်သာနေခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းသူ့မှတ်ချက်က “ယူတောင်မယူရသေးဘူး နင့်အဖေက နေရာတကာဝင်ပါတယ်” တဲ့။
ချစ်သူသက်တမ်းတစ်လျှောက်လုံးမှာ ကျမမတောင်းပဲနဲ့ သူ့ဆီက ရေမွှေးပုလင်းလေးတစ်လုံး လက်ဆောင်တစ်ခုရဖူးတယ်။ ကျမပျော်လိုက်တာလေ။
“ကို …. အဲ့ဒါ သမီးအတွက် သက်သက်ဝယ်လာတာလားဟင် …”
“မဟုတ်ပါဘူး … ငါ့အတွက်ဝယ်တာ ၀ယ်ပြီးမှ အနံ့မကြိုက်လို့ နင့်ပေးတာ” တဲ့ ….
ကျမအပျော်လေးတွေ တစစီပဲ့ကြွေကျသွားတယ် … တုန်လှိုက်နေတဲ့အသံနဲ့
“သြော် မသိပါဘူး …. သမီးအတွက်သက်သက်ဝယ်လာတယ်ထင်လို့ … ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပါ သမီးဒီအနံ့လေးကြိုက်တယ် … ကျေးဇူးပဲနော် ကို ….”
ကျမ ဟန်ဆောင်တာ မကျွမ်းကျင်ခဲ့ပေမယ့် သူ့ချစ်ခြင်း တစွန်းတစလေးတောင် ကျမဆီ ပြန်ပဲ့ပါမလာခဲ့တာတော့ သေချာပါတယ်။ ခုချိန်ထိ ကျမ စိတ်မပျက်သေးတာကို သူများစိတ်ပျက်လေမလားလို့တော့ ကျမ မတွေးမိခဲ့ဘူး။ ကျမ ညံ့ခဲ့တာပါ။
ကျမရဲ့ ယုံကြည်ခြင်းမိုးတိမ်တွေ ပြိုကျတဲ့နေ့တစ်နေ့ ….
အဲ့ဒီနေ့မတိုင်ခင်က သူကျမကို စိတ်ဆိုးသွားခဲ့တယ်။ ကျမနဲ့ပတ်သတ်ပြီး အချိန်ပိုင်းအလုပ်အတွက် အလုပ်သွင်းပေးထားတဲ့ သူငယ်ချင်းက အလုပ်နောက်ကျတာများလို့ ကျမနဲ့စကားများရာက စတာပါ။ နောက်နေ့ကျတော့ သူ့ကိုချော့ဖို့ ကျမအလုပ်ကခွင့်ယူပြီး သူ့အလုပ်ရှိရာ FMI စင်တာရဲ့ တစ်ဘက် ပလက်ဖေါင်းပေါ်မှာ မနက် ၈ နာရီခွဲလောက်ကတည်းက ရောက်နေခဲ့တယ်။ သူက ၉ နာရီလောက် အလုပ်လာတတ်ပေမယ့် မတော်လို့ စောလာခဲ့ရင် လွဲသွားမှာစိုးတာနဲ့ စောထွက်ခဲ့တာပါ။ သူ အလုပ်ကိုစောစွာရောက်နှင့်နေခဲ့တယ်ဆိုတာ စင်တာထဲကထွက်လာမှ ကျမသိခဲ့ရတယ်။ သူ့ဘေးမှာ ခပ်သွယ်သွယ် အသားညိုညို ပိန်ပိန်ပါးပါး ကောင်မလေးတစ်ယောက်က သူ့လက်ကိုချိတ်လို့ ကားလမ်းကို ဖြတ်ကူးလာခဲ့တယ်။ သူ ကျမကို မမြင်သလို ကျမလဲ သူ့ကိုခပ်ဝါးဝါးပဲမြင်ရတယ်။ ဘယ်အချိန်က အိုင်ထွန်းလာမှန်းမသိတဲ့ မျက်ရည်တွေက ကျမမျက်ဝန်းမှာပြည့်လို့ပေါ့။
ဟင့်အင်း …. ကျမ မငိုပါဘူး။ မငိုချင်ပါဘူး။ သူ့ဆီက အကြောင်းပြချက် တခုခုကို နားထောင်ချင်သေးတယ်။ အချစ်တွေနဲ့ ကျမရဲ့ တစ်သက်တာအတွက် ရွေးချယ်မှုတစ်ခုဟာ ဒီမြင်ကွင်းလေးတစ်ခုတည်းနဲ့ ပျက်ဆီးသွားရမှာကို ကျမ မလိုလားပါဘူး။
“ဟင် … ငယ်ငယ် …. နင်ဘာလာလုပ်တာလဲ” အိုးတိုးအမ်းတမ်း ဖြစ်သွားတဲ့ သူ့မျက်နှာရယ်၊ ကျမရဲ့ ကြေကွဲမျက်နှာရယ်ကြောင့်ထင်ပါရဲ့ ကောင်မလေး လက်တွဲတာကို ဖြုတ်လိုက်တယ်။
“သမီး ကိုxxx ကိုပြောစရာရှိလို့”
“ငါ အခု မနက်စာသွားစားမလို့ နင်အလုပ်သွားတော့” လို့ တစ်ခွန်းပဲပြောပြီး လက်ချင်းချိတ် ဆက်လှမ်းထွက်သွားတာကို ကြည့်နေရင်း ကျမနှလုံးသားကို ဖြတ်နင်းလျှောက်သွားသလို ကျမရင်တွေ နာကျင်လိုက်တာ။ ရင်ထဲမှာ ဟာပြီး တလှပ်လှပ်နဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံးကို ကျမမမြင်ရတော့ဘူး။ ကျမ မငိုပေမယ့် မျက်ရည်တွေ စီးကျလာခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကို ကျမ မယုံကြည်နိုင်ခဲ့ဘူး။
ကျမ ဘာတွေမှားခဲ့သလဲ? ကျမသူ့ကို နှစ်နှစ်ကာကာ ချစ်ခဲ့တာပါ။ သူလိုအပ်တိုင်းမှာ ကျမ ဖြည့်ဆည်းဖို့ကြိုးစားခဲ့တာပါ။ သူအပြစ်လုပ်တိုင်းမှာ လူတစ်ယောက်ကို ချစ်ရင် သူ့ရဲ့ ကောင်းတာကော၊ ဆိုးတာကောကို လက်ခံရမယ်ဆိုတဲ့ စိတ်နဲ့ ကျမနေခဲ့တာပါ။ ကျမ မချမ်းသာခဲ့ပေမယ့် သူ့ကို ဘယ်တုန်းကမှ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုး မဖြစ်စေခဲ့ပါဘူး။ ကျမ မလုပ်နိုင်တဲ့ကိစ္စတွေမှာ ကျမ ကတိမပေးခဲ့တာတွေရှိမယ်။ ဒါပေမယ့် ကလန်ကဆန်မလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ ကျမသူ့အပေါ် သစ္စာရှိခဲ့ပါတယ်။ ကျမ ရုပ်မလှပေမယ့် ချစ်စရာကောင်းတဲ့ရုပ်ရည်တော့ရှိပါတယ်။ ကျမ မပိန်ပေမယ့် တရားလွန်မ၀ပါဘူး။ ကျမ ပညာအရည်အချင်း မညံ့ခဲ့ပါဘူး။ ဒီအရည်အချင်းတွေအားလုံးထဲမှာ သူလိုချင်တာ ဘာကြောင့် တစ်ခုမှ မပါခဲ့တာလဲ။ သူလိုချင်တာဘာလဲ? ကျမဘာတွေလိုအပ်ခဲ့သလဲဟင်?
သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်တဲ့။ ဒါပေမယ့် ဆန့်ကျင်ဘက်လားရာနဲ့ဆိုတာ ကျမ ဘာလို့ ဆက်မဖတ်ခဲ့မိပါလိမ့်။
လွဲနေတဲ့ ကျမရဲ့ နိယာမထဲမှာ ကျမနေခဲ့တာ ၃ နှစ်။ အသည်းကွဲဝေဒနာ ခံစားခဲ့ရတာ ၁ နှစ်ခွဲ။
သူ့ကြောင့် ကျမရဲ့အတ္တကြီးတဲ့စိတ်တွေ အများကြီးလျော့ချနိုင်ခဲ့တယ်။ သိပ်မချစ်တတ်တော့အောင်လဲ နေတတ်ခဲ့တယ်။ အခြေအနေနဲ့ အချိန်အခါအရ ပုံသေနည်းတွေ၊ နိယာမတွေကိုလည်း ဘာသာပြန်တတ်ခဲ့တယ်။ အရာရာတိုင်းအတွက် ခုထိ ကျေးဇူးတင်ဆဲပါ။
Posted by ကြယ်ပြာ at 9:12 PM 14 comments Links to this post
Credit to http://happylifequotes.com
ကျမတို့ရဲ့ချစ်သူသက်တမ်း(၃)လအကြာမှာ ပထမဆုံးပြဿနာစတက်ခဲ့တယ်။ သူက ကျမလက်ကိုတွဲပြီး လမ်းလျှောက်ချင်သူ ကျမက အဖေ၊ အစ်ကို၊ မောင်တွေရဲ့ သူငယ်ချင်းတွေမြင်သွားမှာ သေမလောက်ကြောက်သူ။ ဒီတော့ ဆွဲကိုင်လာတဲ့ သူ့လက်ကို ကျမ ရုန်းထွက်ခဲ့မိတယ်။ သူ့ဘက်ကကြည့်တော့ လူကြားထဲမှာ သူ့ကို အရှက်ခွဲသတဲ့။ ကျမဘက်ကတော့ လက်ကိုင်တာလေး မခံတာ သူဘာလို့ ဒီလောက်ခံစားနေသလဲ လို့ပဲမြင်ခဲ့မိတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ ကျမလက်ကို သူဘယ်တော့စပြီး မကိုင်တော့ဘူးလို့ ပါးစပ်နဲ့ပြောခဲ့သလို အလုပ်နဲ့လည်း သက်သေပြခဲ့တယ်။ ကျမကတော့ အပြစ်ရှိသူတစ်ယောက်လို လမ်းကူးတိုင်း သူ့လက်ကို စတင်ဆွဲကိုင်သူတစ်ယောက် ဖြစ်မှန်းမသိ ဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။ ကျမကသူ့လက်ကို ဆွဲကိုင်လိုက်တိုင်း တင်းကျပ်စွာပြန်လည်ဆုပ်ကိုင်လာတဲ့ သူ့လက်တစ်ဘက်ကအင်အားတွေ ကျမရင်ထဲစီးမျောသွားတယ်ဆိုတာ သူသိချင်မှသိမှာပေါ့လေ။
ကျမတို့ ထရိန်နင်မှာ ပရက်တီကယ်ဖီးလ်က လာတဲ့ ကျမက စာတွေ့များတဲ့သူ့ကို ပရောဂျက်တခုခုလုပ်တိုင်း အမြဲသာလေ့ရှိတယ်။ ကျမကသာသွားတိုင်း သူက အမြဲမကျေမနပ်ဖြစ်ခဲ့သလို၊ ကျမက အရင်အလုပ်ပြီးသွားတိုင်းလည်း သူ့ပရောဂျက်ကို ဆက်မလုပ်ပဲ ရပ်ပစ်လိုက်တာမျိုး ကြုံလာရတော့ ကျမစိတ်မကောင်းဖြစ်ခဲ့ရတယ်။ အလုပ်ခွင်မှာ သူက ကျမကိုပြိုင်ဖက်တစ်ယောက်လို သဘောထားခဲ့ပေမယ့် ကျမကတော့ သူဟာ တချိန်ကျရင် ကျမအိမ်ဦးနတ်ဖြစ်မယ့်သူလို့ ယုံကြည်စွာနဲ့ အလျော့ပေးဖို့ပဲစဉ်းစားခဲ့တယ်။ ကျမမှတ်မိပါတယ် သူကျမကို ပထမဆုံး အနိုင်ရလိုက်တဲ့အချိန်မှာ သူဟာ အင်မတန်ပျော်ရွှင်နေခဲ့တယ်။ အပြုံးတွေနဲ့ သူ့မျက်နှာရယ်၊ နင့်ကိုငါနိုင်သွားပြီိလို့ ပြောနေတဲ့ အကြည့်တွေရယ်ကို ကျမ အမြတ်တနိုးသိမ်းဆည်းထားခဲ့ဖူးတယ်။ ကျမရဲ့ပညာမာနတွေ အကုန်ကြမ်းပြင်ပေါ်ချပြီးမှ သူ့ကိုအနိုင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတာကိုတော့ သူသိအောင် ကျမ ဘယ်တော့မှ ပြောပြဖြစ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။ အချစ်ဆိုတာ အနိုင်ယူဖို့မှ မဟုတ်တာပဲလေ။
သူမာစတာတန်းဖြေခါနီးတုန်းက စာတွေသိပ်များပြီးပြာယာခတ်နေခဲ့တာပေါ့။ သူ့အိမ်ကလဲ သူငယ်ချင်းယောက်ျားလေးတွေစုငှါးပြီးနေတာဆိုတော့ သူ့အိမ်မှာ စာကျက်ရတာ သိပ်အဆင်မပြေလှဘူး။ ဒီတော့ ရန်ကုန်တက္ကသိုလ်ကြီးရဲ့ အဓိပတိလမ်းပေါ်က ရေတမာပင်အောက်က ခုံတန်းဝိုင်းလေးတွေက ကျမတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ နေရာလေးတွေခဏဖြစ်ခဲ့ဖူးတယ်။ နှစ်ယောက်သားရေတမာပင်ကိုမှီလို့ တင်ပလင်ခွေထိုင်ရင်း၊ သူ့စာတွေကျမပါကူကျက်ပေးခဲ့ဖူးတယ်။ နှစ်ယောက်သား TRIO သကြားလုံးထုတ်လေး ဘေးချပြီး ကော်ဖီသောက်သလို တလုံးပြီး တလုံးစားရင်း စာကျက်ခဲ့ကြတဲ့ ဒီလိုပြိုင်ဆိုင်မှုမရှိတဲ့အချိန်လေးတွေဟာ ကျမအတွက်သိပ်ကြည်နူးစရာဖြစ်ခဲ့သလို၊ အမှတ်ရစရာကောင်းခဲ့တယ်။
ဒီလိုနဲ့တစ်နေ့မှာ သူ့ပရောဂျက်တွေကို ကျမက အမြဲလုပ်ပေးလို့ ဆိုပြီး ကုမ္ပဏီမှာ ဆက်လုပ်ဖို့ အရည်အချင်းမမှီဘူးဆိုတဲ့ ပြစ်ချက်နဲ့ သူ ကုမ္ပဏီကနေ ထွက်ခဲ့ရတယ်။ ကျမတို့ကုမ္ပဏီက ထရိန်နင်ပြီးရင် နိုင်ငံခြားအလုပ်အကိုင် အခွင့်အလမ်းသေချာတဲ့အတွက် သူ့ရဲ့ ရည်မှန်းချက်တွေ ပြိုလဲကျကုန်တယ်။ အမြဲစိတ်ဓါတ်မာခဲ့တဲ့သူ ကျမရှေ့မှာ မျက်ရည်ကျတာ မြင်လိုက်ရတဲ့အချိန်မှာ ကျမရင်ထဲမှာ ငါ့ကြောင့်ဖြစ်ရတာရယ်လို့ သူ့အစား ၀မ်းနည်းနာကျင်ရသလို သူ့အတွက်ဆိုရင် တတ်နိုင်သလောက် အကောင်းဆုံးတွေချည်းပဲ ပေးဆပ်မယ်လို့ ကျမ ဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။
နောက်တော့ သူအလုပ်သစ်ရသွားခဲ့တယ်။ သူ့အလုပ်က FMI စင်တာမှာ ကျမအလုပ်က ကန်တော်လေးထဲမှာ။ နေ့တိုင်းတွေ့နေတဲ့မျက်နှာတစ်ခုကို နေ့တိုင်းမှ မမြင်ရတော့မှပဲ ကျမလွမ်းတတ်လာသလို သူ့ကို တော်တော်ချစ်ပါလားလို့ ကျမသိလာခဲ့တယ်။ ကျမနဲ့သူနဲ့ နေ့တိုင်းမတွေ့ဖြစ်တော့ဘူး။ တွေ့ဖြစ်တိုင်းမှာလည်း အချစ်အကြောင်းထက် သူ့အလုပ်ရဲ့ စိန်ခေါ်မှုတွေနဲ့ ကျမကို ယှဉ်ပြိုင်ချင်တာတွေကသာ သူ့မှာပိုများခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် အသွားအပြန် နိယာမကို ကျမ ယုံကြည်လက်ခံဆဲမို့ သူ့အပေါ် မေတ္တာတစ်စက်မပျက်ခဲ့ပါဘူး။
သာသာယာယာရှိတဲ့နေ့လေးတစ်နေ့မှာ တိတိကျကျပြောရရင် သူ့မွေးနေ့ ဇူလိုင်(၁၉)ရက်နေ့မှာ သူက ကျမဆီကို ပုံပြင်လေးတစ်ပုဒ်သယ်ဆောင်လာခဲ့တယ်။
အဲ့ဒီနေ့လေးမှာ သူ့ကိုလက်ဆောင်ပေးဖို့ဆိုပြီး ပိတ်စအဖြူအကောင်းစား အစလေးနဲ့ ခေါင်းအုံးစွပ်လှလှလေးတစ်လုံးကို ကျမ သူ့အတွက်ချုပ်ပေးထားတယ်။ အဲ့ဒီခေါင်းအုံးစွပ်လေးကို မေတ္တာတွေ အပြည့်နဲ့ အဓိပ္ပါယ်တွေအပြည့်နဲ့ ကျမချုပ်ခဲ့တာမို့လို့ အပေါ်ယံကြည့်ရင် တန်ဘိုးနည်းပေးမယ့် မြင်တတ်ရင် တန်ဘိုးမနည်းလှပါဘူး။ ကျမစိတ်ကူးလေးနဲ့ကျမ ပျော်ရွှင်စွာ သူ့ဆီရောက်သွားတဲ့အခါ အသည်းပုံလေးပေါ်မှာ ကောင်လေးနဲ့ကောင်မလေး မတ်တပ်ရပ်ပြီးနမ်းနေတဲ့ ခရစ်စတယ် ကီးချိန်းလေးနဲ့ ပုဆိုးတစ်ထည်ကို ထုတ်ပြရင်း သူက “ငါ့အလုပ်က ၀န်ထမ်းကောင်မလေးတစ်ယောက် လက်ဆောင်ပေးတာ” လို့ ခပ်တည်တည်ပဲ ပြောခဲ့တယ်။ ကျမက သူ့အတွက်လက်ဆောင်လေး ထုတ်ပေးလိုက်တဲ့အချိန်မှာ “ငါက အိပ်ယာခင်း အဓိကလိုနေတာ” လို့ ကျမကို ပြောပြီး ကျမခေါင်းအုံးစွပ်လေးကို စိတ်မ၀င်စားခဲ့ဘူး။ ကီးချိန်းလေးကို ကြည့်ရင်း ရင်ထဲမှာဖြစ်လာတဲ့ ပူပန်မှုတွေ အပြင် မျက်နှာငယ်ရရှာတဲ့ ကျမရဲ့လက်ဆောင်လေးအကြောင်းတွေးရင်း ခံစားချက် နှစ်စုံနှစ်ရာနဲ့ ရင်ထဲမှာလှိုက်လို့ ၀မ်းနည်းပူလောင်နေခဲ့တယ်။
ကီးချိန်းကြည့်ရတာ သိပ်မရိုးဘူးနော်လို့ ကျမ သူ့ကို သတိပေးတော့ သူက “ဟာ … ရိုးရိုးပါဟာ နင်ကလဲ” လို့ ခပ်ပေါ့ပေါ့ဖြေခဲ့တယ်။
“လက်ဆောင်ပေးတဲ့ ကောင်မလေးက အလုပ်နည်းနည်းအားတာနဲ့ ငါထိုင်တဲ့အခန်းရဲ့ ရှေ့နားလာလာပြီး ငါ့ကို ကြည့်တယ် ဟ”
“ဒီနေ့ ငါ့အတွက် ပန်းသီးဝယ်လာပေးတယ်။ ငါ မစားဘူးပြောတော့ အမှိုက်ပုံးထဲပစ်မယ်ပြောလို့ ငါယူထားလိုက်ရတယ်။”
“ဒီနေ့ ထမင်းတူတူစားဖို့ လာခေါ်တော့ ငါ သူနဲ့ တူတူ ထမင်းစားဖြစ်တယ်”
“သူက တခါတလေ လမ်းကူးရင် ငါ့လက်ကို ကိုင်ပြီး ကူးတတ်တယ်နော် .. နင် မြင်ရင် အထင်လွဲမှာ စိုးလို့ ကြိုပြောတာ”
“ငယ်ငယ်ရေ … သူကလေ တစ်လ တစ်လ မိတ်ကပ်ဘိုးချည်းပဲ သောင်းကျော်ကုန်တာ ဟ …. သိလား” လို့ သနပ်ခါးကိုသာ ခုံခုံမင်မင်လူးတတ်တဲ့ကျမကို နှစ်သက်စွာရွေးချယ်ခဲ့တဲ့သူ့ပါးစပ်က အထင်တကြီး ဒီလိုပြောလာတဲ့အချိန်မှာ ကျမ ကြားနိုင်စွမ်းမရှိတော့လို့ သူ့ကို အပြင်းအထန် ကွန်ပလိန့်လုပ်ခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီအတွက် စိတ်ဆိုးပြီး လူတွေရှု့ပ်ရှက်ခတ်နေတဲ့ မြို့ထဲလမ်းမကြီးမှာ ကျမကို ထားပစ်ခဲ့ပြီး သူတစ်ယောက်တည်း ကားဂိတ်ကို လျှောက်ချသွားတဲ့နောက်ကို ကျမ မပြေးရုံတမယ်ခြေလှမ်းနဲ့ လိုက်ခဲ့ရဖူးတယ်။ ယောက်ျားတစ်ယောက်နောက်ကို ဒီလိုပြေးလိုက်ရမယ်လို့ ဘယ်တုန်းကမှ မမျှော်လင့်ထားဖူးတဲ့ကျမ ရှက်တာရော၊ ၀မ်းနည်းတာရောစုပြုံလို့ မျက်ရည်ကတော့ ၀ဲနေခဲ့ပြီ။ ဖြက်ကနဲ (၁၀၇) ဒိုင်နာကားပေါ်တက်လိုက်တာကို လှမ်းမြင်လိုက်တော့ ကျမပါ ပြေးပြီးလိုက်တက်ခဲ့တယ်။ ကံမကောင်းချင်တော့ ကျမအတက်၊ ကားက အထွက်မှာ လက်က ခုံနဲ့ဘေးကကာထားတဲ့ သံပြားကြားညှပ်ပြီး အသားလန်ထွက်သွားခဲ့တယ်။ သွေးတွေ မြင်မကောင်းအောင်ထွက်လာသလို၊ မျက်ရည်တွေလဲ တလဟောသွန်ကျလာတဲ့ အချိန်ကျမှ ကျမလက်ကိုဆက်ကနဲ ဆွဲယူလိုက်ပြီး ဒဏ်ရာကို တစ်ရှုးစနဲ့ အုပ်ပေးခဲ့တယ်။
မျက်နှာကြော အနည်းငယ်လျော့ပြီး “နင်ကလဲ သတိမထားဘူး။ ဘာလို့ကားထွက်နေတုန်း ပြေးတက်ရတာလဲ” ဆိုတဲ့ စကားတစ်ခွန်းအောက်မှာ ကျမ၀မ်းနည်းနာကျင်တာတွေ ယူပစ်သလို ပျောက်သွားခဲ့ပြီး သူဂရုစိုက်သားပဲရယ်လို့ကျေနပ်ပျော်ရွှင်သွားခဲ့တာ သူကပဲတော်လွန်းခဲ့တာလား၊ ကျမကပဲ ခွင့်လွှတ်လွယ်လွန်းတာလားလို့ ကျမ မတွေးခဲ့ဘူး။အဲ့ဒီအချိန်ကစလို့ သူ့ဆီက ဘာပုံပြင်မှ ထပ်မကြားခဲ့ရတော့ဘူး။ ပုံပြင်မရှိတော့တာမဟုတ်ပဲ မပြောပြတော့တာ ဆိုတာကို ကျမနောက်ကျမှ သိခဲ့ရတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 5:55 PM6comments Links to this post
Credit to http://themusicalfruit.net
သက်ရောက်မှုတိုင်းမှာ တန်ပြန်သက်ရောက်မှုရှိတယ်ဆိုတဲ့ နိယာမကို ကျမ အလေးအနက် ယုံကြည်ခဲ့ဖူးတယ်။
အချစ်ဆိုတာ ရူးသွပ်ရမယ့်အရာလို့ ဘယ်တုန်းကမှ မထင်ခဲ့ပေမယ့် အချစ်ကြောင့် ကျမ ရူးသွပ်ခဲ့ဖူးတယ်။
ရိုးရိုးလေးပါ။ ဇာတ်လမ်းလေးက တကယ်ကို ရိုးရိုးလေးရယ်ပါ။
သူနှင့်ကျမက ကုမ္ပဏီတစ်ခုတည်းမှာ အတူတူအလုပ်လုပ်ကြတယ်။ ထိုင်တော့လဲ ခုံချင်းက ကပ်လျက်၊ သူငယ်ချင်းဆိုလဲ ဟုတ်၊ လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်ဆိုလဲ ဟုတ်ခဲ့ကြတယ်။ ကျမတို့ သူငယ်ချင်း မိန်းကလေး(၃)ယောက်ရယ်၊ သူရယ်နဲ့က သွားအတူ၊ လာအတူ နဲ့ စိတ်တူကိုယ်တူရှိခဲ့ကြတယ်။ ပတ်ဝန်းကျင်ကလဲ သူ ဘယ်တစ်ယောက်ကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ရယ်လို့ အတိအကျမသိခဲ့ကြဘူး။ ကျမကတော့ ကျမကို စိတ်ဝင်စားနေတယ်ဆိုတာကို သူတိတ်တဆိတ်ပို့ထားတဲ့ မေးလ်တွေက တဆင့် ကြိုသိနေခဲ့တယ်။ သူငယ်ချင်းဘ၀မှာကတည်းက ကျမကို အလိုက်သိလွန်းသောသူ့ကို ကျမလဲ စိတ်ဝင်စားခဲ့တယ်ဆိုရင် မမှားပါဘူး။ သူက ကျမကို တစ်ခုသော တနင်္ဂနွေနေ့မှာ ချစ်ရေးဆိုခဲ့တယ်။
“ငယ်ငယ် … ငါ နင့်ကို ချစ်တယ်” လို့ သူပြောတဲ့အချိန်မှာ ကျမ ရင်ခုန်ခဲ့သလား၊ မခုန်ခဲ့ဘူးလား သေသေချာချာ မမှတ်မိတော့ပေမယ့် ကျမ ရှက်နေခဲ့တာတော့ သေချာခဲ့ပါတယ်။ ဒါဟာ အချစ်ဟုတ်၊မဟုတ်ဆိုတာလည်း ကျမ မသိခဲ့သလို၊ ဆန်းစစ်ဖို့လည်း သတိမရခဲ့ဘူး။
“သမီးကို ဘာလို့ ချစ်တာလဲ ပြောပြ” လို့ကျမ ပြန်မေးတော့
သူက “ငါ နင့်ကို စာမေးပွဲခန်းမှာ ကတည်းက စတွေ့ဖူးပြီး သဘောကျခဲ့တာ။ ငါက စာမေးပွဲဖြေဖို့ ချွေးပြန်နေတဲ့အချိန်မှာ နင်က ရှေ့က စားပွဲကိုသွားပြီး နင့်သူငယ်ချင်းနဲ့ စကားတွေပြောလို့ … ငါ့ စိတ်ထဲမှာ ဒီကောင်မလေးက စားမေးပွဲခန်းကို မကြောက်ဘူးလားမသိဘူးလို့တွေးမိတယ်။ ပြီးတော့ ငါ့စိတ်ထဲဘယ်လိုဖြစ်မှန်းမသိဘူး ဒီစာမေးပွဲပြီးရင် ပြန်တွေ့ပါစေလို့ ဆုတောင်းမိတယ်” လို့ တနံတလျားရှင်းပြပါတယ်။
ကျမမှာ အကျင့်တစ်ခုရှိတာက ကျမထက် အသက်ကြီးသူတွေနဲ့ စကားပြောတာမှာ ကျမကိုယ်ကျမ “သမီး” လို့ နာမ်စားသုံးလေ့ရှိတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ သူနဲ့ စကားပြောတော့လည်း “သမီး” လို့ကိုယ့်ကိုကိုယ်သုံးဖြစ်ခဲ့တာပေါ့။
နောက်ပြီးတော့ စာမေးပွဲဆိုတာက ကျမတို့အလုပ်လုပ်ချင်တဲ့ ကုမ္ပဏီကို ၀င်ခွင့်ဖြေရတဲ့ စာမေးပွဲပါ။ ကျမက တစ်ခါဖြေပြီး အောင်ခဲ့ပေမယ့်၊ နှုတ်ဖြေမှာ ကျခဲ့လို့ နောက်တစ်ခါ ပြန်ဖြေတဲ့ အချိန်မှာ သူ ကျမကို တွေ့ခဲ့တာပါ။ သူနဲ့ ဆုံဆည်းဖို့ ကံ ပါလာလို့လား မသိ သူကော၊ ကျမကော စာမေးပွဲအောင်ခဲ့ပါတယ်။
အောင်စာရင်းထွက်တဲ့နေ့ကိုလည်း ကျမ မှတ်မိနေခဲ့တယ်။ ကျမတို့ နာမည်တွေကို ဘုတ်မှာ ကပ်ထားတာကို ကျမသွားကြည့်တော့ သူလည်း အဲ့ဒီနေရာမှာ ရှိနေခဲ့တယ်။ ကျမက နာမည်တွေကို လက်ထောက်ရွတ်ရင်းက ဒီနာမည်က မိန်းကလေး နာမည်ကြီးလိုပဲနော်လို့ ကျမ သူငယ်ချင်းကို ပြောပြတော့ အနောက်ဘက်ကနေ “မဟုတ်ပါဘူးဗျာ … ယောက်ျား နာမည်စစ်စစ်ပါ” လို့ ရုတ်တရက်အသံထွက်လာတော့ လန့်သွားသလို၊ အားလည်းနာသွားမိတယ်။ ကျမ သူ့ကို ပထမဆုံး စမြင်ဖူးခဲ့တဲ့ အချိန်ပေါ့။ တခါမြင်ယုံနဲ့ မှတ်မိလောက်အောင် စွဲဆောင်မှုမရှိတဲ့ သူ့ပုံစံကြောင့် ကျမ သူ့ကို ခပ်လွယ်လွယ်မေ့သွားတာ မထူးဆန်းဘူးဆိုရမယ်။
ဒီလိုနဲ့ပဲ ကျမတို့ အပတ်စဉ်တူတူ အလုပ်ဝင်ခွင့်ရခဲ့ကြတယ်။ ကျမတို့အလုပ်မှာ ထရိန်နင် ပေးတော့ မြန်မာစကားလုံးဝမတတ်၊ လုံးဝနားမလည်တဲ့ အိန္ဒိယက ဆရာတွေက စာသင်ကြတယ်။ သူတို့က ကျမတို့တွေရဲ့ နာမည်ကို အသံထွက်ရခက်တော့ ကျမတို့တွေ နစ်ခ်နိမ်း ပေးကြရတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်မှာ ကျမရဲ့နစ်ခ်က ဂျက်ဆီကာတဲ့။ သူ့ကိုတော့ ဆရာက ဆန်နီလို့ပေးခဲ့ပေမယ့် သူက ကျမသဘောကျတဲ့ လီယိုနာဒို ဆိုတဲ့ နာမည်ကို နစ်ခ်အဖြစ်ယူခဲ့တယ်။ ဒီလိုနဲ့ တလျှောက်လုံး ကျမ စိတ်ညစ်တိုင်း ဖျောင်းဖြ၊ ကျမ စိတ်တိုတိုင်းလဲ ချော့မော့ပြောပြတတ်တော့ သူ ကျမကို တော်တော် နားလည်တယ်ရယ်လို့ ကျမဘာသာပြန်ခဲ့မိတယ်။
အရပ်ခပ်ပြတ်ပြတ်၊ အသားခပ်ညိုညိုနဲ့ အညာသား သူ့မှာ ကျမ သဘောကျတာဆိုလို့ ရှည်ကော့နေတဲ့ မျက်တောင်တစ်စုံရယ်၊ ကျမကို နားလည်မှုပေးနိုင်တယ်ဆိုတဲ့ ယုံကြည်ချက်တစ်ခုရယ်နဲ့ သူ့အချစ်ကို ကျမ လက်ခံခဲ့တယ်။ အမှန်အတိုင်းဝန်ခံရမယ်ဆိုရင်အချစ်ဆိုတာ သူ့ကို ချစ်သူအဖြစ်လက်ခံပြီးမှ ကျမရင်ထဲမှာ တဖြေးဖြေးချင်းဖြစ်တည်လာခဲ့တာပါ။
ကျမတို့ ချစ်သူဖြစ်ပြီးကြတော့ သူက ကုမ္ပဏီမှာ သူ့ကိုသိပ်စကားမပြောဖို့ ကျမကိုပြောတယ်။ ကျမက အရင်ကတည်းက သူငယ်ချင်း၊ ခုလည်းထူးပြီးတော့ ပိုဆက်ဆံနေတာမှမဟုတ်တာ စကားပြောတာကို ကန့်သတ်တာ ကျမ မကြိုက်ခဲ့ဘူး။ ဒါပေမယ့် အဲ့ဒီအချိန်တုန်းသူ့စကားဆိုရင် ကျမ နားထောင်ချင်တယ်။ သူ့ဘက်က ထုတ်တဲ့ စည်းကမ်းတိုင်းကို လိုက်နာပြီး သူ့ကို ဘယ်လောက်ချစ်ကြောင်း၊ ဂရုစိုက်ကြောင်းပြချင်ခဲ့မိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ တသက်မှာ ချစ်သူတစ်ယောက်သာ ထားချင်ခဲ့ပြီး ဒီတစ်ယောက်ကိုပဲ လက်ထပ်မယ်လို့ ကျမ ဆုံးဖြတ်ထားခဲ့လို့ပါပဲ။
ကျမရဲ့စလင်းဘတ်ထဲမှာ အပ်ချည်ကြိုးနဲ့ အပ် အမြဲဆောင်လေ့ရှိတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ ကျမသူငယ်ချင်းမလေးတွေက စကပ်လုံချည်ဝတ်လေ့ရှိကြလို့ပါ။ သူတို့စကပ်လုံချည်တွေက အခန့်မသင့်ရင် ကွဲတာ၊ ချိတ်ပြုတ်တာတွေ ဖြစ်တတ်တော့ တွယ်ချိတ်နဲ့ဆိုရင် အမြင်ဆိုးတာမို့လို့ ကျမကပဲ ချုပ်ပေးလေ့ရှိတယ်။ အဲ့လို ဆောင်တတ်တာလေးက ကျမချစ်သူကို ကျမချစ်ကြောင်းပြနိုင်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လဲ မမှားပါဘူး။ ပထမဆုံးတစ်ခါက သူ့အင်္ကျီကြယ်သီးပြုတ်သွားတဲ့အချိန်၊ နောက်တစ်ချိန်က သူ့ ကျောပိုးအိတ် ဇစ်ပျက်သွားတဲ့အချိန်ရယ်ပေါ့။ ကျမ သူ့ပစ္စည်း အပျက်အစီးလေးတွေကို ကျမလက်နဲ့ ချုပ်ရိုးသေသပ်စွာနဲ့ အမြန်ဆုံးပြုပြင်ပေးနိုင်ခဲ့တယ်။ သူ အသိအမှတ် ပြုပြု၊ မပြုပြု ကျမကိုယ်ကျမတော့ အင်မတန် ဂုဏ်ယူခဲ့ဖူးတယ်။
Posted by ကြယ်ပြာ at 5:58 AM 8 comments Links to this post